Vao tafiditra ireo jiolahy, dia ny vola avy hatrany no notadiavin’ireo jiolahy, ary ilay zazalahy namoha ny trano no voadaroka vy tamin’ny lohany, ka nahitana dian-dratra niisa telo. Taorian’izay dia ilay renim-pianakaviana indray no nosamborin’izy ireo sy nodarohany ihany koa ary notereny hamoaka ny vola, ka telo hetsy Ariary mahery no lasan’ireo jiolahy.
Tafavoaka ny trano ary afaka niantso vonjy izy mianaka ka dia tonga ny Fokonolona ary nitsoaka ireo jiolay. Ratra telo ihany koa moa no nahazo ilay renim-pianakaviana tao min’ny lohany ary notapahin’ireo jiolahy ny rantsan-tanany iray.
(Sary Gasypatriote Antsirabe)